Ugu yaraan lix dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqaymo uu Mareykanku ka geystay koonfurta Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan lix dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqaymo uu Mareykanku ka geystay koonfurta Soomaaliya
September 13, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa sheegay in ay dileen lix dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab kadib saddex duqaymood oo ka dhan ah Al-Shabaab, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay.
“Iyadoo lala kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, ciidamada Mareykanka waxay saddex duqaymood oo ka dhan Al-Shabaab ka geysteen gudaha Soomaaliya maanta oo Arbaco ah oo bishu tahay 13-ka September saacada Soomaaliyana ay ahayd 2:15 a.m., waxaana lagu dilay lix argagixiso ah,” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika.
“Howlgalka ayaa ka dhacay koonfurta Soomaaliya, meel qiyaas ahaan 260-km dhanka koonfurta ka xigta caasimada Muqdisho. Mareykanka ayaa qaaday howlgalkan iyadoo uu xadidayo ogolaanshaha Madaxweynaha Mareykanku bixiyay bishii Maarso ee sanadkan 2017, kaasoo u ogolaanaya ciidamada Mareykanka in ay qaadi karaan weerar dhimasho leh oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya si loo taageero saaxiibada Mareykanka ee jooga Soomaaliya.” Bayaanka ayaa sidaa lagu sii yiri.
Mareykanka ayaa kordhiyay duqaymaha ka dhanka ah Al-Shabaab, asbuucyadii lasoo dhaafay tobonaan katirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sare ayaa lagu dilay weeraro duqaymo ah oo ay Mareykanku ku bartilmaameedsadeen deegaano kuyaala koonfurta Soomaaliya halkaas oo ay ku xooganyihiin maleeshiyadu.